China Aluminium Coated COIL fekitari uye bhizimisi | Alucosun
ALUMUMUM RAKUZVEDZA Coil
Yakagara-pendwa aruminiyamu inopa yakanyanya mhando mhando pevhu yepamusoro mune akasiyana mavara uye mavara. Inotowanikwa nemafirimu akadhindwa kupa mhedzisiro senge huni-zviyo uye machena.
Ruvara runogona kuve rwakanyanya matt kana rwakanyanya kupenya, rwakatsetseka, anti-kukwenya kutarisa. Iyo zvakare inowanikwa mune akasiyana aruminiyamu mamaki uye alloys kuitira kuti iwe ugone kuyananisa kugadzikana uye simba. Alucosun inopa yakakwirira inokwanisa yakavharwa coil mu PE, HDPE, PVDF, NANO-PVDF mhando yeako akawanda-application.
Alucosun aruminiyamu inoumbwa nepaneru inotora chete PVDF KYNAR 500 kana FEVE mapendi anozivikanwa nekusimba kwavo kwakasimba. Iwo akanakisa makemikari uye epanyama zvivakwa zvemhando iyi pendi zvakanyatsozivikanwa uye zvichiratidzwa nevashandisi vepasirese nevakagadziri mukati memakore gumi apfuura uye izvozvi zvichiri kuenderera zuva rega rega.
Alucosun ine risingagumi ruvara renji uye akasiyana-siyana magumo sarudzo, kusangana nevakagadziri uye vagadziri 'isina muganho kugona.
Alucosun NANO-PVDF aruminiyamu inoumbwa neparutivi yakaputirwa neNano-PVDF pendi yakaturikidzana, ichiwedzera anti-kusvibisa NANO yakajeka yakajeka yekumhara pamusoro pePVDF yekupenda pane kumberi aluminium ganda. Kunze kwekukosha kwese kunoshamisa kwePVDF kupfeka, NANO-PVDF iri nani mukusvibisa-kuramba, kemikari-chiratidzo uye nekuzvichenesa.
Seizvo microscope inoratidza, PVDF pamusoro payo ine mabundu apo imwe yeNANO-PVDF iri mushe. Nekuda kweizvi, kunyorova uye mafuta hazvigone kupinda mukati uye madonhwe emvura anogona kuvabvisa, zvichideredza mutengo wekuchengetedza.
Alucosun huni uye machena machena anobatanidza runako rwehuni nematombo uye akaisvonaka zvivakwa zveAlucosun aluminium composite pani, kuunza kutsva kutaridzika kwezvivakwa. Imwe mukana wakakomba pamusoro peiyo chaiyo dombo uye dombo ndeyekuti izvo zvinhu zvinogona kuumbwa kune chero chakakumbirwa dhizaini.
Mhando mbiri dzinowanikwa neKynar pendi yekupedzisa mhando yakashandiswa Izvi zvinogara zvakakwana kune kwenguva refu yekunze kunyorera nepo kupera kwePET firimu yakaiswa yakanaka asi inodhura kune yekushongedza kwemukati.
Bhurashi & Girazi
Alucosun brushed uye girazi nhevedzano zvinokutendera kuti ugamuchire kukwezva kukwikwidza nemhando yepamusoro yekudzivirira lacquer, ukuwo, ichikupa kuita kwepamusoro kweAlucosun aluminium composite pani senge kuomarara kunoshamisa uye kusagadzikana kwemamiriro ekunze. Mune zvakadzama, brashi dzakateedzana dzinoita kuti iwe uone iyo yakasvibirira aruminiyamu pane yayo yepamusoro uye girazi nhevedzano inokupa iwe yakafanana ratidziro segirazi regirazi iro rinoteerera kumanikidza.
Kutenda kune yakasarudzika mhedzisiro, aya maviri ekupedzisa anonyanya kufarirwa mune yakasarudzika yemukati yekushongedza uye kuratidza. Kunze kwezvo, Alucosun zvakare ine anodized kutarisa kweaya maviri apedza kupa evakagadziri mazano ekugadzira mukati mekunze nekuvaka kwenguva yakareba warandi.
Solid, simbi, Matanda, Mirror, Anodized, brushed
PE, HDPE, PVDF, FEVE, NANO-PVDF, ANODIZEDI
Roofing, Ceiling, Door, Kugadzira ACP, Gutter, Corrugated Roofing
mukati memazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu kunoenderana nehukuru chaihwo hwemakoiri
Isingachinjiki L / C pakuona, kana T / T.
Pashure: STEEL KOMPANITI Panel
Zvadaro: ALUMINUM KOMPANITI Panel
Aluminium yakavharwa coil
Yakaputirwa Aluminium Coil
Yakaputirwa Ruvara Aluminium Coil
Ruvara Rakafukidzwa Aluminium Coil
Pvdf Yakaputirwa Aluminium Coil